ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာနိုင်ငံမှာ OIC ရုံးဖွင့်မယ့်ကိစ္စနဲ့ လက်ပံတောင်းတောင် အကြမ်းဖက်မှု ရှုတ်ချတဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ မကွေးကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဦးပါမောက္ခကို မြို့နယ်သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့ကနေ ထုတ်ပယ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာတော်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ် (ရုပ်သံ)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ OIC ရုံးဖွင့်မယ့်ကိစ္စနဲ့ လက်ပံတောင်းတောင် အကြမ်းဖက်မှု ရှုတ်ချတဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ မကွေးကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဦးပါမောက္ခကို မြို့နယ်သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့ကနေ ထုတ်ပယ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာတော်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ် (ရုပ်သံ)
ဒရိုင်ဘာပြောတာ မှန်တယ်။ လမ်းဖေါက်မယ်ဆိုရင် မြေအသားကျအောင် ပြုလုပ်ပြီးမှ ကျောက်ခင်း-ကတ္တရာခင်းပြု လုပ်တာ
မြင်ဘူးပါတယ်- ကျနော်ရောက်နေတဲ့ အော်စတေးလျားမှာ လမ်းခင်းတာ မီးတိုင်-၂၀ လောက် အကွာအဝေးကို မြေအသားကျအောင် ရေဖျန်း-
ပြီးတော့ လမ်းကြိတ်စက်နဲ့ ကြိတ် နဲ့အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ ပြု လုပ်ပါတယ်-မြေအသားကျပြီဆိုမှ ကျောက်ခင်းကတ္တရာခင်းလမ်းကြိတ်စက်နဲ့အချောပြန်ကြိတ်ပါတယ်။ တနှစ်နီးပါလောက် အချိန်ယူ
ဆောက်လုပ်ပါတယ်- ပြီးပြီးဆိုတော့ လမ်းကို ညက်နေတာဘဲ ကားဘယ်လောက်ဘဲ မြန်မြန် မခုန်ဘူး- ငြိမ်နေတာဘဲ- တဆက်ထဲ ပြောပါရစေ
ဆောက်တော့လဲ မြေညှိနေတာက တနှစ်လောက်ကြာတယ်။ မြေကို လိုချင်တဲ့ ပုံစံရပြီဆိုတော့ ရပ်ကွက်လမ်းတွေကတ္တရာခင်း-မီးတိုင်တွေစိုက်-မီးသွယ်-ပြီးတော့ သောက်သုံးရေ ပိုက်တွေ တပ်ဆင်-ပြီးပြီဆိုတော့မှ အိမ်တွေဆောက် လုပ်ခွင့်ပြုတာပါ။ အမြန်ပြီးဘို့အဆောတလျှင် မလုပ်ပါဘူး-ပြည်သူလူထု အန္တရယ်ကင်းအောင် ဆောင်ရွက်ပါတယ်-အားလုံးပြီးပြီဆိုတော့ သတင်းစာမကြည့်နဲ့မပါဘူး-တီဗွီသတင်းမကြည့်နဲ့ -မပါဘူး။
ဒါကို နိုင်ငံတော်အစိုးရက စက်ယန္တရားကြီးတွေအသုံးပြုပြီး ပြည်သူ့ အတွက်
ဆောက်လုပ်-လိုအပ်သည်များ ညွှန်ကြားဆိုတာတွေ ဘာမှ မပါဘူး-သတင်းလို့ လဲ ဘယ်သူမှ မယူဆပါဘူးခင်ဗျာ-
Han Thar said...
သံဃာ.သင်းခွဲ မည်. ပုဂိုလ်တော် ကြီးများ
အမောင် ကတုံး ခတ်တုံးတုံး .......
ကိုယ်.အလုပ် ကိုယ်မလုပ် ........
နေရာတကာ သူတို. ရှုတ် ........
သူတို. စခန်း ခပ်တန်းတန်း .......
အပယ် စခန်း ကြို လို.လှမ်း ........
Han Thar ဒါလားကွ မြန်မာဗမာလူမျိုးဆိုတာ ငာသနာကွယ်တာ တခြား ဘာသာခြားတွေကြောင့်
မဟုတ်ဘူး မင်းတို့ လို လူငနွားတွေကြောင့် သာသနာ
ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေတာကွ စစ်ခွေးတွေ ဝေငှတဲ့ အရိုး
တွေကိုကိုက်နေရလို့ဘာငာ သာသနာကိုစော်ကါး
နေကြတဲ့ အကောင်တွေ ခွေးတောင်မှ ကိုယအိပ်တဲ့
အိပ်ယာမှာ အိမပါဘူး မင်းတို့ တွေက ကိုယ် ကိုးကွယ်နေ
တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဘာသာကို ပြန်စော်ကားနေကြတယ်
နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်မေးမယ် ဒါလား မင်းတို့ 
အိုဘာမှလာမပြောနေနဲ့ ဗမာလူမျိုးစစ်စစ် မိမစစ်ဖမစစ် မဟုတ်ဘူး ရေမရောဘူး အဖေလဲအညာသားဗမာလူမျိုး အမေလဲအညာသူဗမာမစစ်စစ် ဆိုတော့ သားသမီးတွေ ကလဲ ဗမာလူမျိုးစစ်စစ် မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်ပါတယ်
နောင်လာမယ့် သမ္မတရွေးပွဲတွေမှာဝင်ပြိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ
အော် ဒီလိုလား okey မှတ်ထားလိုက်မယ် ဗမာဆိုယင်
သာသနာဖျက် တိုင်းပြည်ဖျက်တဲ့လူမျိုးစုလို့ 
လို တာမဟုတ်ပါ ၊ ဒါပေမယ်. ၅ နှစ် ၁ ကြိမ် တော.
ရိုသေစွာ အကြံပြုပါတယ် အရှင်ဘုရား တို.ဘုရား ။
kyawthusukyi ဆိုတဲ့ ခွေးလဲ လီးစုပ် ဒစ်ငုံ
ခိုင်းပြီး ဖာတန်း မှာ သမ္မတ နေရာ ပေးရမယ်
jully soe, မင်းက သာသနာအကြောင်း ဘာနားလည်းလို.လဲ၊ ဘုရားထားခဲ.တဲ သာသနာက ဘာအဓိပယ်နဲ. ထားခဲ.တာလဲ.ကော မင်းသိလား၊ ငါပြောချင်တဲ. အဓိပါယ်က IOC နဲ. လက်ပံတောင် ကိစ မဟုတ်ဘူး၊ ဒီကိုယ်တော်တွေ တလွဲဆံပင်ကောင်းနေလို. ပြောတာ.... နွားရဲ.
Very active monks, but just applicance of laymen and party (i.e. In Letpadaung, no laymen was hurt only monks suffered).
It should consider true stand under Buddha's discourse to be peaceful enclosure.
ဒကာ၊ ဒကာမ လှူတဲ. ဆွမ်း၊ကွမ်းကို စားပြီး
ဒကာ၊ ဒကာမ တွေကိုလဲ အပယ် ခေါ်သွားမည်. ပုဂိုလ်တော် ကြီးများ
u see..even monk they killed..DARE to do....why not..monk also has heart..feel pain for unjustice..unfair...heartless matters... how can be torelate...nobody can knob head. GREAT PEOPLE only can give their lives for JUSTICE AND HUMAN RIGHT.only who is stupid and agree to them will be quiet... let their hands and hearts be pain by namicimas...